Angi Roofing ၏ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု မရှိခြင်းနှင့် စိတ်ဝင်စားမှု ပဋိပက္ခများသည် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်သင့်သည် | Martech Zone
ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ဝေမှု၏စာဖတ်သူများသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် အမိုးမိုးသည့်ကုမ္ပဏီများစွာကို ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းတည်ရှိမှုကိုတည်ဆောက်ရန်၊ ၎င်းတို့၏ဒေသခံရှာဖွေမှုကို တိုးပွားလာစေပြီး ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဦးဆောင်လမ်းပြမှုများပြုလုပ်ရန် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ပေမည်။ Angi (ယခင်က Angie ၏စာရင်း) သည် ၎င်းတို့၏ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို ဒေသအလိုက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးခဲ့သော အဓိကဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလည်း သင်မှတ်မိပေမည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ လုပ်ငန်း၏ အာရုံစိုက်မှုသည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သတင်းပို့ရန်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန် ၎င်းတို့၏စနစ်ကို အသုံးပြုရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းနဲ့ တည်ထောင်သူတွေကို မယုံနိုင်လောက်အောင် လေးစားမှုရရှိခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကို သိသိသာသာ တိုးတက်အောင် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
18 နှစ်ကျော်ကြာအောင် Angie's List သည် နှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းကို တစ်ခါမျှမပြသခဲ့ဘဲ ကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးဖြတ်မှုများသည် လက်တွေ့မကျဟု လေ့လာသူများက ယူဆကြသည်။ 2017 ခုနှစ်တွင် Angi သည် စားသုံးသူစာရင်းသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းမှ ၎င်းတို့၏သုံးသပ်ချက်များတွင်ဖော်ပြထားသောကုမ္ပဏီများအတွက် ထိပ်တန်းမျိုးဆက်သို့ပြောင်းခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့သည် ပြန်လည်တံဆိပ်ခတ်ကာ ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကာ အိမ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ထပ်မံထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန် မျှော်လင့်ထားသည့် အက်ပ်အသစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ Angi ၏အမှတ်တံဆိပ်ကို သိသိသာသာကြီးထွားလာစေသော အခကြေးငွေစာရင်းသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းထက် ဦးဆောင်မျိုးဆက်တွင် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိရန် အခွင့်အလမ်းရှိနေကြောင်း သံသယအနည်းငယ်မျှသာရှိပါသည်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ အရမ်းဝေးသွားပြီလို့ ငါယုံကြည်တယ်။
အတုအယောင် ဦးဆောင်မှုများဖြင့် ကြီးထွားလာသော ပြဿနာ
ကျွန်တော့်ဒေသခံတစ်ဦး Indianapolis ခေါင်မိုးများ Angi နှင့် နှစ်ချုပ်စာချုပ်တစ်ခုဖြင့် ငွေအမြောက်အမြားသုံးစွဲပြီး ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို ဦးတည်စေပါသည်။ ကျွန်တော် Bob နဲ့ သူရဲ့ မိသားစုလုပ်ငန်းနဲ့ နှစ်အတော်ကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒီ့မတိုင်ခင်ကတောင် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ မကြာသေးမီက Bob သည် သူပို၍ တိုးလာသည်ကို သတိပြုမိသည်။ အတုအယောင်များ Angi မှတဆင့် ... နှင့်ကြီးမားသောအလုပ်များနှင့်အတူကောင်းသောဦးဆောင်လမ်းပြမှုနှေးကွေးလာတယ်။ Angi ကို Bob ရဲ့ လစဉ် ကတိကဝတ်ကို ထုတ်ဖော်မပြောပေမယ့် ဒါက အရွယ်အစားကြီးတဲ့ စာချုပ်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သုံးလအတွင်း၊ သူသည် အတုအယောင် ၇၂ ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး တစ်ခုစီသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းမှ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
Bob က ကျွန်မကို ဒီအကြောင်းကို ပိုပြောပြီး Angi ကို တိုင်ကြားဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေက မကြားရပါဘူး။ သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ မကြာခဏ အလှည့်ကျလာတာကို သတိထားမိပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားတယ်။ အိမ်အမိုးအကာနှင့် အရံအခွင့်အလမ်းများ တဟုန်ထိုးတက်လာသည့်အချိန်တွင် ဤအရာအားလုံးသည် ကူးစက်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် အိမ်ဝန်ဆောင်မှုများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးမြင့်လာပါသည်။
Angie's List သည် အင်ဒီယားနားအလယ်ပိုင်းတွင် နှုတ်ဖြင့်ပြော၍တည်ဆောက်ထားပြီး ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ငှားရမ်းအသုံးပြုသည့် မိသားစုများက နှစ်သက်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အများသူငှာ ရောင်းတာဆိုတာကို သူတို့ လုံး၀ နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ယုံကြည်မှု... အိမ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ကြီးမားသောပြဿနာတစ်ခု။
တကယ်တော့၊ အားလုံးက အတက်အကျဖြစ်မှာသေချာစေဖို့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက သူတို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့ မှုခင်းဆေးပညာကို သူတို့လူသိရှင်ကြားမထုတ်ခင်မှာ Angie's List နဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ စာချုပ်တစ်ခုရှိတယ်။ ၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် မည်သည့်အရာကိုမျှ အန္တရာယ်မပြုကြပေ။
အဲဒါက အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို မယုံတော့ဘူး။ ပြီးတော့ အဲဒါက သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိတယ်။
တကယ်တော့ 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးဗျူရိုက Angi ၏ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ အသိအမှတ်ပြုထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် အချို့သောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသော BBB လိုအပ်ချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးကောက်ရိုး- Angi အမိုးမိုးခြင်း။
ဘယ်သူလဲ အမိုးမိုးခြင်း ကန်ထရိုက်တာ အများစု သုံးသပ်ချက် အချို့သောပထဝီဝင်ဒေသများရှိ Angi နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်သောသုံးသပ်ချက်များနှင့်အတူ? အဲဒါကို သိလိုက်ရလို့ မင်း အံ့သြသွားနိုင်တယ်။ Angi မိုးမိုး.
Bob သည် ကိုးကားချက်များထုတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖောက်သည်များနှင့် တွေ့ဆုံနေစဉ်၊ ဦးဆောင်မှုများအတွက် ပေးဆောင်နေသော ကုမ္ပဏီသည် သူနှင့် တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဆိုင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်းက သူ၏ အံ့သြမှုကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ မှန်ပါတယ်… Angi သည် အချို့သော ပထဝီဝင်အမိုးမိုးကာကုမ္ပဏီများကို ခေါ်ယူထားပြီး ၎င်းတို့၏ ကုမ္ပဏီသို့ တိုက်ရိုက် ဦးဆောင်မောင်းနှင်နေပါသည်။
အဆိုအရ အဆိုပါ Motley Foolဒီဟာက မနှစ်ကမှ စတင်ခဲ့တာပါ။
ယခု Angi Roofing ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားနေပြီး စျေးကွက် တစ်ဒါဇင်ခန့်တွင် ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မကြာမီ နောက်ထပ်ငါးခုတွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Hanrahan မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Roofing သည် ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်သက်သဘောကျသော အမျိုးအစားတစ်ခုတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အရည်အသွေးများစွာရှိပြီး၊ သူခန့်မှန်းထားသည့် ပျမ်းမျှအမှာစာတန်ဖိုးနှင့် လိပ်စာရနိုင်သော စျေးကွက်ကြီးတစ်ခုအပါအဝင်၊ ၎င်းတွင် ဒေါ်လာ 50 ဘီလီယံခန့်ရှိသည်။
အဆိုပါ Motley Fool
ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်သည် ဒေါသတကြီးဖြစ်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းသည် လျှော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Angi က သူ့ဆီ ဆက်သွယ်ပြီး ဝယ်ယူမှုအကြောင်း ပြောပြခဲ့ဖူးသလို သူတို့ဟာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို ဦးတည်မောင်းနှင်နေကြောင်း ဘယ်တော့မှ မပြောပြခဲ့သလို ကျန်ကြွင်းကျန်နိုင်ခြေများတယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မပြောခဲ့ဖူးပါဘူး။ Bob သည် ဥပဒေအကြံပေးကိုလိုက်၍ Angi နှင့်သူ၏စာချုပ်မှချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ရန်ရှာဖွေနေသည်။
Google Maps တွင် အနောက်အလယ်ပိုင်းရှိ အချို့မြို့များတွင် ရှာဖွေပြီး Angi သည် ဒေသဆိုင်ရာမြေပုံထုပ်များကို လွှဲပြောင်းရယူပြီး အရောင်းမြှင့်တင်နေကြောင်း သင်တွေ့ရပါမည်။ Angi မိုးမိုး. ပြီးတော့၊ သူတို့က ဒီလုပ်ငန်းတွေကို မြှင့်တင်နေတာ အမိုးမိုးခြင်း ကန်ထရိုက်တာ အများစု သုံးသပ်ချက် အပြင်မှာ… ဟေ့… အဲဒါ မင်းသူတို့ကို ဝယ်လိုက်တာ။
Federal Trade Commission က ဘယ်မှာလဲ။
Angi ဆိုက်ကို အမြန်ကြည့်လိုက်တော့ မင်းမတွေ့ဘူး။ ထင်ရှားစွာထုတ်ဖော်ခြင်း။ ဤဘဏ္ဍာရေးဆက်ဆံရေး၏။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် စားသုံးသူများအား ညွှန်ပြနေသည့် စက်ဝိုင်းပုံ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ရှိခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လွတ်လပ်သော သုံးသပ်ချက်များကို ပေးဆောင်နေသော ယုံကြည်စိတ်ချရသော သြဇာလွှမ်းမိုးသူဖြစ်သည်... သို့သော် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အိတ်ကပ်ထဲသို့ ၀င်ငွေအားလုံးကို မောင်းနှင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါက၊ ၎င်းသည် လှည့်စားသည်ဟု ထင်မြင်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အာမခံပါသည်။ .
Angi ၏ပင်မစာမျက်နှာနှင့်၎င်းတို့၏ဖော်ပြချက်တွင်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ဖော်မှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အိမ်ခေါင်မိုးရှာဖွေခြင်း။:
ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းဝန်ဆောင်မှုများပေါ်တွင် နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးသူသည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆီသို့ ဦးတည်နေကြောင်း ထင်ရှားစွာထုတ်ဖော်မပြဘဲ၊ ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့နှင့်မပြိုင်ဆိုင်ကြောင်းကို ထုတ်ဖော်မပြောဘဲ၊ ယင်းကို မည်သူမျှ မေးခွန်းထုတ်စရာပင်မရှိပေ။
Angi က ဒီနေရာမှာ တရားမ၀င်လုပ်ခဲ့တာလို့ ငါစွပ်စွဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ ငါဒါကိုလူတိုင်းရဲ့အာရုံကိုယူဆောင်လာရုံပဲဖြစ်ပြီးမီဒီယာနဲ့ FTC ကဒါကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာကြည့်ရှုသင့်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ၎င်း၏ မျက်နှာပြင်တွင်၊ ၎င်းသည် လှည့်စားသော ကြော်ငြာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယူဆပါသည်။ အနည်းဆုံးအားဖြင့်၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ မယုံနိုင်လောက်အောင် ညံ့ဖျင်းသော စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကို ပြသသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ငါဘယ်တော့မှမယုံနိုင်ဘူး။ သုံးသပ်ချက်ဆိုဒ် အမှီအခိုကင်းတဲ့ အရင်းအမြစ် အကြံပြုချက်တွေကို ရရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့နေရာ – Angi ကိုယ်တိုင်က အကြံပြုထားတဲ့ ကုမ္ပဏီကို ရှာဖွေပါ။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်ထံမှ ဦးဆောင်လမ်းပြမှုအတွက် မည်သည့်အခါမျှ ပေးချေမည်မဟုတ်ပါ။
Tags: Angi သုံးသပ်ချက်angi မိုးမိုးangi မိုးမိုးစင်စင်နာတီအင်ဒီယာနာပိုလစ် အမိုးအကာAngieAngie ၏စာရင်းbbbftc ထုတ်ဖော်အိမ်ဝန်ဆောင်မှုများခဲမျိုးဆက်reviewsယုံကြည်မှုယုံကြည်ရသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဇွန် 20, 2022 မှာ 6: 35 pm တွင်
အလို! အဲဒါ အရူးပဲ! "Angie" ၏အစောပိုင်းကာလများမှ "Angi" ၏လက်ရှိစီးပွားရေးအလေ့အကျင့်များဆီသို့သွားသောခရီးဖြစ်သည်။ အတူတူမဟုတ်ပေမယ့် Amazon မှစီးပွားရေးအလေ့အကျင့်အချို့ကိုသတိရစေသည်။ ကုမ္ပဏီများအတွက် "စျေးကွက်" ပံ့ပိုးပေးရုံသာမကဘဲ စျေးကွက်တွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချသူဖြစ်လာစေရန် ၎င်းတို့၏ ချဲ့ထွင်မှုသည် ၎င်းတို့အပေါ် အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည့် အဆင့်ကစားကွင်းတစ်ခုလိုပင် သင်ကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်နိုင်သည့် မည်သည့်နည်းလမ်း သို့မဟုတ် စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြင့်မဆို လုပ်ဆောင်နိုင်သည် ။